Myanmarxxx, save the date dating service | USA
« Porno randonwebcam
Myanmarxxx dating tips the
ယူအက်စ် မက်ဆီကို နယ်စပ်မျဉ်းနားက ရေကန်ကြီးတစ်ကန်အနီးမှ ထူးဆန်းသောသားအမိနှစ်ယောက် တရားမဝင်ခိုးဝင်လာတဲ့ မက်ဆီကန်များကို မှောင်ခိုသွင်းပေးနေတဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ ဖွင့်ထားသော တည်းခိုခန်း တည်းခိုခန်းမှာ လာတည်းတဲ့ သူတွေ မကြာခဏ ပျောက်ပျောက်နေရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းအစစ်အမှန် အဆိုပါတည်းခိုခန်းကို မမျှော်လင့်ဘဲ ရောက်လာတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကြောင့် အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲခဲ့ရတဲ့ ဒီဘဝကနေရုန်းထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့ရသူ အချစ်ဦးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသူ အက်စတာတစ်ယောက် မိခင်ဖြစ်သူ၏ထူးဆန်းလာမှု တွေကို နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရပြီးနောက် ငွေကြေး ဥစ္စာဓနရဲ့ နောက်ကွယ်က မိခင်၏ စိတ်သဘောထားအမှန်ကို သိလိုက်ရချိန်မှာ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်သလဲဆိုတာ ကြည့်ရှူခံစားရမယ့် ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ် အသက် ၁၈ မပြည့်သေးသူများ ကြည့်ရှူရန်မသင့်သည့် ဇာတ်ဝင်ခန်းအချို့ ပါဝင်ပါသည်၊၊ ရုပ်ရှင်ကားကို ဘာသာပြန်ပြီး အညွှန်းရေးပေးထားတာကတော့ Nyan Lin Oo ဖြစ်ပါတယ် တက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲမှာမေးခွန်းမှားယွင်းထုတ်ခဲ့တာကြောင့် ကျောင်းသိက္ခာမကျစေရန် ကျောင်းဘက်ကကာကွယ်မှုဟာ ကျောင်းသားတွေအတွက် နစ်နာမှုရှိတယ်လို့ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်ချင်နေတဲ့ ပါမောက္ခဂင်ယောင်းဟို ... နောက်ဆုံးစီရင်ချက်ကရော ဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတာ လှည့်ကွက်မျိုးစုံနဲ့တွေ့မြင်ရမှာပါ ။ ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ဘာသာပြန်ပြီး အညွှန်းရေးပေးထားတာကတော့ Myat Noe MN ဖြစ်ပါတယ် High School Musical လို သီချင်းတွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ဇာတ်ကားမျိုးကိုနှစ်သက်ရင် ဒီဇာတ်ကားကိုနှစ်သက်မယ်ဆိုတာ အာမခံပါရစေ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဒီကားလေးရဲ့ prequels ၂ကားကိုကြည့်ဖူးရင်သိကြမှာပါ မယ်က ဗီလိန်မယ်လီဖီးဆန့်ရဲ့သမီးတော်ပါ ဘန်ကတော့ beauty ဘဲလ် and the beast ရဲ့သားတော်ပါ သူတို့နှစ်ယောက်က မတူညီတဲ့နေရာနှစ်ခုက ပေါက်ဖွားလာပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တွေ့ဆုံချစ်ကြိုက်ပြီး အခုဇာတ်ကားမှာဆိုရင် လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲတောင်ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါကိုမကျေနပ်နိုင်သူကတော့ Sleeping Beauty အော်ရိုရာရဲ့သမီးတော်ပါပဲ ပင်ကိုတော်ဝင်သွေးပါသူဖြစ်ပေမယ့် မနာလိုမုန်းတီးစိတ်တွေဖုံးလွှမ်းပြီး ဗီလိန်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့...ကျောင်းသိက္ခာဆယ်ဖို့အတွက် အမှန်တရားကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီး ပါမောက္ခဂင်ယောင်းဟိုကို ရာထူကနေပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ ရာထူးပြန်ရဖို့တရားစွဲဆိုခဲ့ပေမဲ့ တရားသူကြီးဘတ်ဘုံးဂျူက ကျောင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီး ဂင်ယောင်းဟိုရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မကျေနပ်စိတ်နဲ့ဘတ်ဘုံးဂျူကိုသွားရောက်တွေ့ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ ဘတ်ဘုံးဂျူနဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် ဘတ်ဘုံးဂျူမှတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ တရားခွင်တောက်လျှောက်သက်သေအလိမ်အညာတွေနဲ့ တရားသူကြီးရဲ့ဘက်လိုက်ပြီးနိုင်ထက်စီးနင်းပြုမူတာတွေပါတွေ့မြင်ရမှာပါ။ ထိုအမှုကိုပါမောက္ခဘက်ကရှေ့နေလိုက်ပေးတဲ့ရှေ့နေဘတ်ဂျွန်ကရော အမှုနိုင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါ့မလား ... မယ်တို့သူငယ်ချင်းတွေဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် ဘာသာပြန်ပြီး အညွှန်းရေးပေးထားသူကတော့ May Myat Thu ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ******* IMDb 6.6 ရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး Dark Comedy/ Horror ကားပရိတ်သတ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ် ဇာတ်ကားနာမည်နဲ့လိုက်ဖက်စွာပဲ ကမ္ဘာပျက်တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာပါ ထူးခြားတာက တစ်ကားလုံးသရုပ်ဆောင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ နာမည်အရင်းတွေ career အစစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပါပဲ Harry Potter မင်းသမီးလေး Emma Watson ရော Rihanna ရော ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ နာမည်ကျော်မင်းသား James Franco ကသူ့ LA ကအိမ်သစ်ကြီးမှ အိမ်သစ်တက်ပွဲပါတီကျင်းပပါတယ် နာမည်ကျော်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ခမ်းခမ်းနားနားပါပဲ တခြားနာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေအဆိုတော်တွေလည်း လာကြတာပေါ့ အဲ့အချိန်မှာမှ ကောင်းကင်ပေါ်ကအပြာရောင်အလင်းတန်းတွေ ကျလာပြီး လူတွေကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာတော့... ။ လူဖြူ သူဌေးကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူက bounty hunter . ။ သူခိုး လူသတ်သမား ဓားပြတွေကို လိုက်ဖမ်းတယ်။ အစိုးရလက်ထဲ အပ်တယ်။ ဆုငွေ ထုတ်စားတယ်။ တစ်နေ့တော့ ခပ်ကျစ်ကျစ် ခပ်ပြတ်ပြတ် လူမည်း တစ်ယောက်ကို တစ်နေရာကနေ သူ ရလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီ လူမည်းနာမည်က Django တဲ့။ ပြီးတော့ Django ကို အဲ့လူဖြူဘဲကြီးက လက်ထောက် တာဝန် ကောက်ခါငင်ကာ ပေးလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီခေတ်မှာ လူမည်းတွေက မြင်းစီးဖို့ မပြောနဲ့။ လူဖြူတွေကို မော်တောင် မကြည့်ရဲဘူး။ ဒါပေမယ့် Django က မြင်းကြီးစီး သေနတ်ကြီးလွယ်ပြီး တစ်မြို့ ဝင် တစ်မြို့ထွက် သူ့ဆရာနဲ့ အတူ ...ထိတ်လန့်သည်းဖို ကြည့်ရမယ့် ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ် ဘာသာပြန်ပေးထားတာကတော့ Hnyot Myet Wunn ဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်လမ်းဟာ ချယ်လ်ဆီးမန်းနင်း ဆိုတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ အတွင်းရေးတွေကို ဖွင့်ချခဲ့တဲ့လူ တစ်ယောက်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ (Documentary) နိုင်ငံရေး မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် အမေရိကန်က Snowden (စနိုးဒန်) တို့ ဆိုရင်တော့ မသိသူ မရှိသလောက်ပါပဲ။ အမေရိကန်ရဲ့ နိုင်ငံရေး အမွှေစိန်ကြီးများပေါ့လေ။ အဲဒီလို အမွှေစိန်များထဲကမှ Bradley Manning တစ်ဖြစ်လဲ လိင်ပြောင်းခွဲစိတ်မှုခံယူထားသူ Chelsea Manning (ချယ်လ်ဆီး မန်းနင်း) ဆိုတာကတော့ အမေရိကန် စစ်သား အဲလေ..စစ်သမီး (ထားပါတော့ whatever)တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အီရတ်စစ်ပွဲ အာဖဂန်စစ်ပွဲတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေအပါအဝင် အမေရိကန် အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို Wiki Leaks ဝီကီလိခ် လို့ခေါ်တဲ့ ထိပ်တန်းသတင်းများပေါက်ကြားရာ ဝက်ဘ် တစ်ခုဆီကို ပေးပို့ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပေးပို့လိုက်တဲ့ စစ်ရေး နိုင်ငံရေးသတင်းတွေကို စစ်ကြည့်လိုက်တော့ Document ပေါင်း ၇၀၀၀၀၀ (၇သိန်းကျော်)ခန့် ရှိပါသတဲ့။ အဲဒီလိုပေါက်ကြားစေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ၂၀၁၀ခုနှစ်မှာ အကျဉ်းချခံခဲ့ရပြီး ၂၀၁၇မှာတော့ လျှော့ပေါ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ ပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စတွေ စဖြစ်တုန်းကတော့ သူက Bradley Manning ဘဝပဲရှိသေးတာပေါ့လေ။ ၂၀၁၃ မှာတော့ သူဟာ ငယ်စဉ်တည်းက အမျိုးသမီးလိုနေချင်သူဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး ချယ်လ်ဆီး အဲလစ်ဇ်ဘတ် မန်းနင်း ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Trans ...နှစ်ဦးသား ကိုယ်ပိုင် ဆေးခန်းတစ်ခုဖွင့်ထားပြီး ဒိုးတူဘောင်ဖက် အလုပ်လုပ်ရင်းအချိန်တွေကုန်ဆုံးစေခဲ့ပါတယ် ဆရာဝန်မလေးက အနေအထိုင်သိမ်မွေ့လှပြီး ယောကျာင်္းဖြစ်သူက အချိန်ပြည့်တဏှာရာဂမီး လောင်ကျွမ်းနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ် ဆရာဝန်မလေးက အချစ်ကို နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာခံစားလိုစိတ်ရှိပြီး ယောကျာင်္းဖြစ်သူက ကိုယ့်ဆန္ဒကိုယ်သာအရေးပေးပြီးကြမ်းတမ်းစွာပဲအချစ်ကိုခံစားလာပါတယ်..သည်လိုနဲ့ နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပေးအယူမမျှတော့ပဲ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်စိတ်ကုန်လာပါတယ်... ယောကျာင်္းဖြစ်သူအတွက်တော့ အကြောင်းပြချက်ကောင်းရသွားပြီး ဆေးခန်းထဲက Reception က ပျိုချောလေးကို ငွေအမ်းပြီး စိတ်တိုင်းကျ ပျော်ပါးပါတော့တယ်။ ဆရာမ ဆွန်ဂျူးကတော့ အိနြေ္ဒကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးပီပီ အိမ်ထောင်ရေးကို တက်နိုင်သလောက် ထိန်းသိမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ဆွန်ဂျူးတစ်ယောက် အလုပ်ကိုလာရင်း လမ်းမှာ လူရမ်းကားတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီး အခက်တွေ့နေချိန်မှာသူမနဲ့မရင်းနှီးတဲ့သူတစ်ယောက် ရုတ်ချည်းဆိုသလိုပေါ်လာပြီး ၀င်ဖြေရှင်းသွားပါတယ်... တတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုမှာတော့ သူတို့ရင်းနှီးသွားကြပြီး ဂင်ယောင်ဂျွန်း ... Zawgyi ===== ၂၀၁၉ခုနှစ်ထွက်ကိုရီးယားကားကိုမှ Stock Exchange နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားရင်တော့ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ။ IMDb rating အရတော့ vote ပေးသူ 175 ဦးအတွက် 5.8 ပဲရထားတယ်ဆိုပေမဲ့ Rotten Tomatoes မှာ 67% အထိရထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ရုံဝင်ငွေအနေနဲ့လည်း 25.1 million USD ရထားတာပါ။ Cast တွေမှာလည်းလူသိများတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေချည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ တောနယ်တစ်ခုကကြိုးစားပြီးတက်လာတဲ့ စတော့ခ်ရှယ်ယာပွဲစားပေါက်စလေးတစ်ယောက်မှာရည်မှန်းချက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ သူချမ်းသာချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းဆင်းရဲရဲနေခဲ့ရတဲ့သူတစ်ယောက်အတွက် ချမ်းသာချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ မိဘတွေရုန်းကန်နေရတာကိုကြည့်ပြီးသူချမ်းသာချင်လာတယ်။ အဲတော့စတော့ခ်ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်ရပြီး စတော့ခ်ရှယ်ယာပွဲစားပေါက်စအဖြစ်အားကြိုးမာန်တက်အလုပ်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီး တက်လာပေမဲ့ တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာတော့ ထင်သလောက်မလွယ်သလိုသူများတွေကော်မရှင်ကပြွတ်သိပ်နေချိန်မှာ သူ့ခဏသုညဖြစ်နေရတာပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့တစ်နှစ်လောက်လုံးချာလည်လိုက်နေရင်းကနေ ချမ်းသာဖို့ဖြတ်လမ်းနည်းတစ်ခု သူရလာခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကြောင့်ရသွားတာလဲ။ အဲဒီဖြတ်လမ်းနည်းကရော ရေရှည်အဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတာတော့ သူတို့စတော့ခ်ရှယ်ယာဈေးကွက်တွင်းကအရှုပ်အရှင်းတွေကြားဝင်ကြည့်ရင်းခံစားကြည့်ကြပါ။ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ ကိုသူရပါ) Unicode ====== ၂၀၁၉ခုနှဈထှကျကိုရီးယားကားကိုမှ Stock Exchange နဲ့ပတျသကျပွီးစိတျဝငျစားရငျတော့ကွညျ့သငျ့တဲ့ဇာတျကားလေးပါ။ IMDb rating အရတော့ vote ပေးသူ 175 ဦးအတှကျ 5.8 ပဲရထားတယျဆိုပမေဲ့ Rotten ...Unicode ******* IMDb 6.6 ရရှိထားတဲ့ဇာတျကားလေးဖွဈပွီး Dark Comedy/ Horror ကားပရိတျသတျတှအေတှကျရညျရှယျပါတယျ ဇာတျကားနာမညျနဲ့လိုကျဖကျစှာပဲ ကမ်ဘာပကျြတဲ့အကွောငျးကိုရိုကျကူးထားတာပါ ထူးခွားတာက တဈကားလုံးသရုပျဆောငျတှဟော သူတို့ရဲ့ နာမညျအရငျးတှေ career အစဈတှအေဖွဈပါဝငျသရုပျဆောငျထားတာပါပဲ Harry Potter မငျးသမီးလေး Emma Watson ရော Rihanna ရော ဧညျ့သညျသရုပျဆောငျအဖွဈပါဝငျထားပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးကတော့ နာမညျကြျောမငျးသား James Franco ကသူ့ LA ကအိမျသဈကွီးမှ အိမျသဈတကျပှဲပါတီကငျြးပပါတယျ နာမညျကြျောတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုငျး ခမျးခမျးနားနားပါပဲ တခွားနာမညျကွီးသရုပျဆောငျတှအေဆိုတျောတှလေညျး လာကွတာပေါ့ အဲ့အခြိနျမှာမှ ကောငျးကငျပျေါကအပွာရောငျအလငျးတနျးတှေ ကလြာပွီး လူတှကေိုချေါသှားတဲ့အခါမှာတော့... (Unicode) MDb 6.7/10 Google Users 90% ဒီတဈခါတော့ ဘောလီဝုဒျပရိသတျကွီးအတှကျ Rom-Com ဇာတျကားကောငျးတဈကား တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျခငျဗြ ၂၀၁၉ ဝငျငှအေကောငျးဆုံး ၁၀ ကား စာရငျးဝငျတဈကားဖွဈသလို အခဈြဟာသဇာတျမွူးတှသောရိုကျလရှေိ့တဲ့ ဒါရိုကျတာ Akiv Ali ရဲ့ ကားကောငျးတဈကားဆိုလညျး မမှားပါဘူး ပိုစတာပျေါမှာ Romantic Comedy Movie ဆိုပွီးရေးရေးထားပွီးပေါပေါလောလောတှေ တငျဆကျနတေဲ့ ကိုယျတှဆေီက မွနျမာကားတှအေနနေဲ့ ဒီလိုကားတှကေနေ ပညာယူသငျ့ပါတယျ Rom-Com ဆိုတာဘာလဲ ဟာသဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈဖို့ အိုကွီးအိုမတှကေ ပေါတောတောတှေ လုပျပွစရာမလိုသလိုဗလတောငျ့တောငျ့ အဈကိုကွီးတှကေလညျး ခွောကျပွစရာမလိုပါဘူး သခေါနီးဘှားတျောကွီးတှေ ရှပွဖို့မလိုသလိုခြာတိတျတှကေ လူကွီးသူမတှကေို သောကျပေါတှပေါလို့ အမွငျမှားအောငျ ရိုကျပွစရာမလိုပါဘူး ကုနျကုနျပွောရရငျ ကလိထိုးပွီး မရယျရဖို့အရေးကွီးပါတယျ ဒီဇာတျကားထဲမှာ Rom-Com ဆိုတဲ့အတိုငျးRomance အခနျးတှမှောလညျး ကွညျနူးစရာတှဖွေဈစသေလိုComedy အခနျးတှမှောလညျး တှေးတှေးပွီးရယျခငျြစိတျတှဖွေဈစပေါတယျ ဒီတော့ မိသားစုနဲ့အတူ ပြျောပြျောပါးပါးနဲ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကားကို ခံစားကွညျ့လိုကျပါပေးလိုကျရတဲ့အခြိနျ ၃ နာရီဝနျးကငျြ အလကားမဖွဈစရေဘူးလို့ အာမခံပါတယျ ဇာတျလမျးလေးပွောပွရရငျ ... Zawgyi ******* 2012 ခုနှစ်က ထွက်ရှိထားပြီး IMDb 8.4 အထိရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းပါပဲ လူမည်းတွေ အမေရိက မှာ အကြီးအကျယ် အနိုင်ကျင့် ရက်စက် ကျွန်ပြုတာ ခံနေရချိန် . (Unicode) ၂၀၁၉ထှကျ တလေဂူး (telugu)အခဈြ၊အကျရှငျ ဇာတျလမျးကောငျးလေး အကွညျထှကျလာလို့ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ မငျးသားနဲ့မငျးသမီးကတော့ Geetha Govindam က မငျးသား Vijay Devarakonda နဲ့မငျးသမီး Rashmika Mandannaပါပဲ။ (မငျးသမီးကတော့ ယှနျးဝတီလှငျမိုးပါပဲ) အညှနျး..ဇာတျကားနာမညျကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုငျး ခဈြလှစှာသော သှေးသောကျရဲဘျောတဲ့။ "သှေးသောကျရဲဘျောဆိုတာ ကိုယျ့လုပျရပျတှကေို ဝနျးရံပေးပွီး တဈဖကျတဈလမျးက ကူညီပေးတဲ့လူ"ပဲမဟုတျလား။ ဇာတျလမျးစစခငျြးမှာဘျောဘီဆိုတဲ့ လူငယျတဈယောကျ မူးရူးသောကျစားပွီး မကျြရညျတှနေဲ့ လီလီဆီ ဖုနျးချေါဖို့ အတငျးကွိုးစားနတေယျ။ လီလီ...
[ Unicode ] The Sand Princess (2019) ================ " သဲမငှးသမီးလေး " သူမနာမညကှ ဂုတှ ( ဂုတခှနှီဖာ) ဂုတဆှိုတဲ့အဓိပပွါယကှ ကှာပနှးလေးပေါ့...တဈခြိနျက သူ့ဘဝထဲ လှလှပပ ဝငျရောကျခိုနားခဲ့ပွီး ဝမျးနညျးမှုတှပေေးပွီးမှ ထှကျခှာသှားခဲ့သူ။ လီလီဟာ ဘာကွောငျ့မြား ဒီလို ထှကျသှားရကျတာလဲ။ ဘျောဘီဟာ စိတျလိုကျမာနျပါ လုပျတတျတဲ့လူတဈယောကျ။ ကြောငျးမှာဆိုရငျလညျး "ကြောငျးသားသမဂ်ဂ" ဆိုတဲ့ နာမညျတဈခုနဲ့ ထငျရာစိုငျးတဲ့ကောငျလို့ အမြားမွငျကွတယျ။ ခဏခဏ ရနျတှဖွေဈတယျ။ သောကျစားတယျ။ ဒါပမေဲ့ မိနျးကလေးတှကေို ...Zawgyi ******* Thriller ကားမျိုးမှာ ဒီလိုမျိုး IMDb 7.6 လောက်ရတာရှားတယ်လို့ပြောရပါမယ် ဒီတစ်ခါတော့ psycho ဆန်ဆန်ဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်...ချန်ဂင်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးတဲ့ Jo Jung-eun ရဲ့ ငယ်ရုပ်အလှကိုပါ ခံစားနိုင်မှာပါ...
ဒီကားလေးကတော့ ၁၉ နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတစ်ယောက် ၅ နှစ်သားကလေးလေးကို ပြန်ပေးဆွဲ သတ်တဲ့အမှုနဲ့ ထောင်ကျသွားခဲ့သူတစ်ယောက်အကြောင်းပါ... သူဘာတွေ လျို့ဝှက်ထားတာက ဘာလဲ...အဖြေကို ဇာတ်လမ်းကြည့်မှ သိနိုင်မှာပါ... Unicode ******* Thriller ကားမြိုးမှာ ဒီလိုမြိုး IMDb 7.6 လောကျရတာရှားတယျလို့ပွောရပါမယျ ဒီတဈခါတော့ psycho ဆနျဆနျဇာတျကားလေးကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ...
ခနျြဂငျဆိုပွီး နာမညျကွီးတဲ့ Jo Jung-eun ရဲ့ ငယျရုပျအလှကိုပါ ခံစားနိုငျမှာပါ...